Timoty Faharoa 2:1-26
Ampitao amin’ny lehilahy mahay ny vaovao tsara (1-7)
Miaritra fahoriana noho ny vaovao tsara (8-13)
Manazava ny tenin’Andriamanitra amin’ny fomba marina tsara (14-19)
Andosiro ny faniriana mpitranga amin’ny tanora (20-22)
Ny atao rehefa misy mpanohitra (23-26)
2 Ataovy foana àry, anaka,+ izay hahazoanao hery avy amin’ny hatsaram-panahy miavaka asehon’i Kristy Jesosy. 2 Ary izay henonao tamiko sady nohamafisin’ny vavolombelona maro,+ dia ampitao amin’ireo lehilahy mendri-pitokisana, izay hahay hampianatra ny hafa kosa avy eo. 3 Miaramila+ tsaran’i Kristy Jesosy ianao, ka miareta koa fahoriana.+ 4 Tsy misy miaramila miditra* amin’ny raharaham-barotr’izao* fiainana izao, raha tiany ny hahazo sitraka amin’ilay nandray azy ho miaramila. 5 Ary na izay mandray anjara amin’ny lalao fifaninanana aza, dia tsy mahazo satroboninahitra raha tsy nanaraka fitsipi-dalao.+ 6 Ny mpamboly izay miasa mafy no voalohany tokony hahazo amin’ny vokatra. 7 Eritrereto foana izay lazaiko. Hanampy anao hahatakatra* tsara ny zava-drehetra ny Tompo. 8 Tsarovy fa efa natsangana tamin’ny maty i Jesosy Kristy+ sady taranak’i Davida,+ araka ny vaovao tsara toriko,+ 9 izay mahatonga ahy hiaritra fahoriana sy higadra toy ny mpanao heloka bevava.+ Tsy voafatotra kosa anefa ny tenin’Andriamanitra.+ 10 Izany no mbola iaretako ny zava-drehetra noho ny amin’ny olom-boafidy,+ mba hahazoan’izy ireo koa an’ilay famonjena azo amin’ny alalan’i Kristy Jesosy, ary mba hahazoany voninahitra mandrakizay. 11 Tena azo atokisana izao teny izao: Raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa,+ 12 ary raha miaritra foana isika, dia ho mpanjaka hiara-mitondra aminy.+ Fa raha mandà azy kosa isika, dia holaviny.+ 13 Ary raha mivadika isika, izy kosa tsy mba hivadika mihitsy, satria tsy toetrany izany.* 14 Ampahatsiahivo azy ireo foana ireo zavatra ireo, ary anaro eo anatrehan’Andriamanitra izy ireo mba tsy hiady hevitra momba ny teny, fa tsy misy ilana azy mihitsy izany satria manimba an’izay mihaino.* 15 Ataovy izay rehetra azonao atao mba hahafahanao mampiseho eo anatrehan’Andriamanitra hoe olona ankasitrahana ianao, dia mpiasa tsy mitsanga-menatra na amin’inona na amin’inona, ary manazava ny tenin’ny fahamarinana amin’ny fomba marina tsara.+ 16 Ialao kosa ny resaka tsy misy fotony manazimbazimba zava-masina,+ satria vao mainka hahatonga ny olona tsy hatahotra an’Andriamanitra izany, 17 sady hitatra hoatran’ny fery mandoaka.* Anisan’ny mpanao an’izany i Hymeneo sy Fileto.+ 18 Niala tamin’ny fahamarinana ireo lehilahy ireo ka nilaza fa efa nitranga sahady, hono, ny fitsanganana amin’ny maty.+ Koa nanimba ny finoan’ny sasany izy ireo. 19 Na izany aza, dia mbola mijoro ihany ny fototra mafy nataon’Andriamanitra, sady misy an’izao tombo-kase izao: “Fantatr’i Jehovah* ny azy”,+ sy hoe: “Aoka tsy hanao ratsy intsony* izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah.”*+ 20 Tsy fitaovana volamena sy volafotsy ihany no ao amin’ny trano lehibe iray, fa fitaovana hazo sy tany koa. Ny sasany natao hampiasaina amin’ny zavatra mendri-kaja, fa ny sasany kosa amin’ny zavatra tsy mendri-kaja. 21 Koa raha misy manalavitra an’ireo farany ireo, dia ho fitaovana natao hampiasaina amin’ny zavatra mendri-kaja izy, ary hohamasinina ka hahasoa ny tompony, sady ho vonona hanao ny asa tsara rehetra. 22 Andosiro àry ny faniriana mpitranga amin’ny tanora, fa miezaha foana kosa hanao ny marina, hanana finoana sy fitiavana ary fiadanana,* miaraka amin’ireo miantso ny Tompo amin’ny fo madio. 23 Ialao koa ny adihevitra adaladala sy tsy misy dikany,+ satria fantatrao fa mampiady izany. 24 Tsy tokony hiady mantsy ny mpanompon’ny Tompo, fa halemy fanahy* amin’ny rehetra kosa,+ hahay hampianatra, hahafehy tena rehefa misy manisy ratsy,+ 25 ary halemy paika rehefa mampianatra an’ireo tsy mora manaiky.+ Angamba Andriamanitra hamela azy ireo hibebaka,* ka hahalala tsara ny fahamarinana+ izy ireo. 26 Dia ho tonga saina izy ireo ka ho afaka amin’ny fandriky ny Devoly, izay nanao azy sambo-belona mba hanao ny sitrapony.+
^ Abt: “mamatotra ny tenany.”
^ Na mety hoe “asa fanao andavanandro eo amin’izao.”
^ Na: “handinika.”
^ Na: “tsy afaka handa ny tenany izy.”
^ Na: “mamadika ny finoan’izay mihaino.”
^ Na: “fery mandoaka ny tenin’izy ireo.”
^ Na: “Aoka hiala amin’ny tsy fahamarinana.”
^ Na: “ary ho tia fihavanana.”
^ Na: “hiova hevitra.”